Hanti-dhowrka doorashada ka dib kama helin wax farqi ah oo ka dhashay natiijadii cod-bixinta ee
News and resources regarding COVID-19
KWIT | By Mulki Osman
Published June 9, 2020 at 6:17 PM CDT
Hanti-dhowrka doorashada ka dib kama helin wax farqi ah oo ka dhashay natiijadii cod-bixinta ee Degmada Woodbury County ee la dheereystay intii lagu jiray doorashadii asbuucii hore.
Tirinta codadka codbixinta ee doorashada si aan kala sooc lahayn loo doortay saaka ayaa la mid ah nambarada lagu xisaabiyo mashiinnada codbixinta bisha Juun 2deeda, xisaabiyaha degmada Woodbury iyo madaxa doorashada Pat Gill ayaa u sheegay Sioux City Journal.
Kiisaska cusub ee Coronavirus ayaa wali ka soo muuqanaya Iowa iyo Woodbury County. Waaxda caafimaadka dadweynaha ee gobolka waxay leedahay maanta Iowa wuxuu leeyahay 307 kiis oo cusub, iyo 21, 918 gobolka oo dhan wuxuuna soo sheegay lix dhimasho oo cusub oo guud ahaan ah 607. Gobolka Woodbury wuxuu ku daray 17 kiis oo ah COVID-19, guud ahaan 2, 931 iyo 37 dhimasho. , laakiin ma jiraan dhimasho cusub maanta.
South Dakota ayaa soo weriyey seddex dhimasho oo cusub oo ka timid COVID-19 maanta, iyo 52 xaaladood oo cusub, sida ay sheegtay Waaxda Caafimaadka. Gobolka waxaa ku dhintey 68 dhimasho oo ka timid COVID-19 iyo 5,523 xaaladood oo fayras ah,
Nebraska wuxuu leeyahay 15,752 kiis oo ah COVID-19, oo ay ku jiraan 118 maanta, iyo 188 ayaa u dhinta cudurka 'coronavirus'.
Saddex maxbuus oo ka tirsan Gobolka Woodbury ee Jeil ayaa laga helay cudurka 'coronavirus' usbuuca dhammaadka, sida laga soo xigtay joornaalka Sioux City Journal. Saddexda maxbuus waxay ahaayeen asymptomatic waxayna la joogeen maxaabiis kale ka hor intii aan la baadhin. Saddexda ayaa hadda go'doonsan. Maxaabiista hartay ee 144 ayaa la tijaabiyay, Sheriff Dave Drew wuxuu sheegay inuu rajeynayo inuu bilaabo natiijooyinka ilaa maanta.
Matxafka Caruurta ee 'LaunchPAD' ee Magaalada Sioux City ayaa loo qorsheeyay in la furo 1-da Luulyo, laakiin waxay yeelan doontaa xayiraad dhowr ah oo meesha looga ilaaliyo faafitaanka COVID-19.
Laakiin LaunchPAD waxay ka codsaneysaa martida inay booqdaan websaydhka madxafka si ay u sii hayaan waqti cayiman kahor intaysan booqan. Matxafka wuxuu leeyahay tirada ugu badan ee martida loo ogolaan doono matxafka hal mar waa 50.
Sanadkii 2020-kii Magaalada LIVE! taxanaha riwaayadaha dibedda ee loo qorsheeyay Juun, Julaay, iyo Ogosto ayaa la joojiyay.
Qabanqaabiyeyaasha taxanaha riwaayada ayaa ku dhawaaqay subaxnimadii Talaadada. Markii la soo saaray war-bixin, qabanqaabiyeyaashu waxay sheegeen sababa la xiriira walaaca socda ee ku saabsan COVID-19 inaysan awoodin inay qorsheeyaan dhacdooyin taxane ah oo ammaan ah, toddobaadle ah.
Sarkaal ka tirsan dhaqaalaha Iowa ayaa galabta ka marag kacaya golaha senate-ka Mareykanka arrimaha ku saabsan dhibaatooyinka halista ah ee dhaawacaya dadaallada lagu doonayo in lagu xoojiyo dhaqaalaha gobolka iyo dhaqaalaha dalka, sida uu sheegayo Radio Iowa.
Senator Iowa Chuck Grassley ayaa gudoominaya dhageysiga guddiga Maaliyadda oo kasoo muuqan doona agaasimaha IWD Bet Townsend. Grassley wuxuu leeyahay guddiga wuxuu diiradda saari doonaa dhibaatada ka dhalatay natiijada ka soo baxday Sharciga CARES ee ka badan waxa shaqaalaha badan ku helayaan mushahar. Grassley wuxuu leeyahay Koongarasku wuxuu dhigay $ 600 doolar caymis dheeri ah oo shaqo la’aan ah oo ka sarreeya waxkastoo 50-ka dowladood ay ku bixin doonaan gobolladooda.
Grassley wuxuu leeyahay waxaa jira fikrado ku saabsan sida loo daaweeyo dhibaatadan, laakiin wax xal ah looma qalin wali.
Gaadiidka iyo iibinta gawaarida cusub ayaa labadaba dib u soo kicinaya iyada oo gobolka ka soo baxayo xiritaanka uu keenay coronavirus.
Agaasimaha Waaxda Gaadiidka ee Iowa, Stuart Anderson, ayaa u sheegay guddiga Gaadiidka intii lagu gudajiray aqoon isweydaarsiga shalay, nambarada taraafikada ayaa hoos u dhacay usbuuca 10-ka Abriil. Anderson wuxuu leeyahay mugga taraafikada ayaa kordhay usbuuc kasta tan iyo markii hooseysa.
Local NewsLocalIowaWoodbury CountyNebraskaSouth DakotaWoodbury County Sheriff Dave DrewLaunchPADnewsIowa Senator Chuck GrassleyCOVID-19Somali
Halima joined MJTCH this year as a Service Coordinator. Working specifically with the English Language Learner program, Halima assists teachers in the placement of students based on testing scores, tutors pre-literacy students, maintains student records, and updates the attendance data. Halima is bilingual with Somali as her first language.
See stories by Halima Osman
Sharci-dajiyayaashu waxay ku soo noqdeen Itowa State Capitol maanta si ay u dhammaystiraan shaqadii ka hadhay markii uu COVID-19 faafidda dib u soo…
Dad lagu qiyaasay 300 oo qof ayaa si wada jir ah ugu soo wada duulay nabadaynta iyo bogsiinta magaalada Sioux City galabnimadii Khamiista ka dib geeridii…
March midnimo ayaa ka dhacday Sioux City galabta. Waxay ka bilaabatay Cook Park iyada oo lagu qiyaasey dad aad u tiro yar oo dhawr boqol ah.Kadib kooxdu…
Qof kale oo degen Gobolka Woodbury wuxuu u dhintey cudurka coronavirus
Qof kale oo degen Gobolka Woodbury wuxuu u dhintey cudurka coronavirus. Marka loo eego Caafimaadka Degmada Siouxland, ninku wuxuu jiray 61 - 80 sano jir.…